Saliid saytuun ah oo dabiici ah oo qashin madow leh - fikrad hadiyad ah - VIP truffles
Bogga ugu weynSaliid saytuun ah oo dabiici ah oo leh dhalo madow
Saliid saytuun dabiici ah oo leh dhalo madow (dhalada 250 ml), qarax dhadhan.
Gaar ahaan, haddii aad jeceshahay badeecooyin gaar ah, oo qurxinaya dhulka iyo dhaqanka. Waxaa lagaa badin doonaa saliida saytuunka dabiiciga ah at udgoon dabiici ah oo ah taraafikada madow, oo ah saliid farsamo oo lagu soo dhex qariyey gobolka Beaux-de-Provence.
Saliida saytuunka waxaa laga sameeyaa saytuun madow oo dabiici ah marka la bislaado. Saytuunkan ayaan soo marin wax daaweyn kiimiko ah. Saytuunka madow waxay bixiyaan qoraallo xariif ah oo ah kookaha iyo hoosta.
Sidoo kale, caraf udgoonkan saytuunka madow waxay si xeeladeysan kor uguqaadeysaa udugga iyo astaamaha caadiga ah ee qashinka. Waa qarax dhadhan loogu talagalay dhadhankaaga!
Gawaarida gawaarida waa badeecad xafladeed, oo ku faana booska meheradaha maqaayadaha caanka ah.
Sidaa awgeed, diyaargarowga ku saleysan isku-dhafka ayaa sidaas darteed ah diyaargarowga ugu culus ee ugu culus.
Tusaale ahaan, saliida saytuunka dhadhan-dhadhanka ah ayaa kor u qaadi doonta suxuunta ugu fudud, suxuunta kulul ama qabow, waxayna kor u qaadi doontaa suxuunta la safeeyey. Dhammaan isku darka cuntada waa suurtagal.
Intaas waxaa sii dheer, qoyskaaga iyo martidaada ayaa si farxad leh ula yaabi doona dhadhanka wanaagsan ee u diyaargarowgaaga. Farxad dhab ah ayey u tahay cunno kariyeyaasha khibradda leh ama kuwa xilliyada qaarkood wax karsada.
Marka la soo gaabiyo, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin ka mid ah isticmaalka saliidda saytuunka ee dhadhan fiican leh ee loo yaqaan 'truffle truffle':
Gabagabadii, dhalada 250 ml oo saliid saytuun dabiici ah oo udgoon dabiici ah ee madow madow waxay kufiican tahay inay ku qanciso kuwa kugu hareeraysan, waana hubaal, fikrad hadiyadeed oo wanaagsan oo gourmet ah.